Umtholampilo "Ultramed" - isikhungo okuhlukahlukene yezokwelapha base enamandla zokuxilonga, unomsebenzi imishini kangcono ucwaningo hardware kanye nokwelashwa. Lesakhiwo ziqasha Ochwepheshe abanolwazi ezindaweni ezidumile uphethwe, ngokwelashwa nokuvimbela. Umtholampilo unikeza isevisi efanele izingane kanye nabantu abadala.
Centre "Ultramed" in Omsk yasungulwa eminyakeni 90 njengenhlangano uphethwe ehhovisi ultrasound. Kancane kancane ukwandisa inani amasevisi. Emtholampilo kwakukhona iziguli njalo, kwandziswa kwelinani letikhungo Ochwepheshe kanye nezinqubo. Ihhovisi Small amasevisi zokuxilonga yayiswa ezingeni elisha futhi waziwa ngokuthi "Female kokubonisana" Umtholampilo ultrasound uphethwe. "
Njengoba Staffing ithuba ikuhlinzeke ngamanye amasevisi sesondlo yokukhulelwa, ukuxilongwa emitholampilo laboratory, ezindaweni ezivulekile wokubonisana ongoti emincane.
Ngo-2009 kwaba khona kabusha, ngenxa lapho isikhungo lithole isimo isikhungo emitholampilo zokuxilonga "Ultramed". Namuhla, isikhungo enye yezindawo ezinkulu kakhulu esibhedlela esizimele Omsk, lapho iziguli lahlukene kwezinsizakalo zokwelashwa. eziyinkimbinkimbi Medical ezisekelwe emasayithini eziningana emzini, okuyinto esilungele iziguli eziningi.
Umtholampilo "Ultramed" in Omsk ifakwe zokuxilonga uchwepheshe imishini ekilasini yesimanje, okubandakanya tomography Kuvunguza, imishini ultrasound kanye nekhono uthole 3D-image ngasiphi angle, ukusebenza imishini iyunithi, nemishini ye-X-ray ukuhlola nge ezingeni ephephile emisebeni, nokuningi.
Isakhiwo "Ultramed" isikhungo in Omsk zihlanganisa:
Izibhedlela (nsuku zonke, ayimi).
Clinical futhi laboratory eziyinkimbinkimbi.
ngokuhlukana ezikhethekile (paroxysmal neziyaluyalu, izivivinyo ngokomzimba nokunye.).
Abasebenzi kanye nokuphathwa Centre ubona umsebenzi wawo izinsizakalo zezempilo ngempumelelo yibo bonke tigaba.
Centre "Ultramed" in Omsk - a isikhungo sezokwelapha okuhlukahlukene. umnyango Iziguli sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya basuke kuboniswane kanye iphathwa nguchwepheshe elandelayo ezindaweni:
Zokubelethisa and zabesifazane.
Ophikweni olubhekene nezifo zamathambo.
Psychiatry kanye psychology.
Physiotherapy, i-ozone nabanye.
Odokotela bathola ezingaphezu kuka-50 zochwepheshe ewumngcingo emnyangweni sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya. Miningi imisebenzi kuhlanganisa ukuhlola, kokuthintana, aphoyintimenti yokwelashwa, izinqubo sinenkonzo yokunakekela iziguli emakhaya, ukuvuselelwa kanye nokuvinjelwa. Ukuze isiguli ngasinye ukuthuthukisa isimiso sabo ukwelashwa, ngemva kwalokho wakhipha izincomo tekuvikela nokuziphatha okwalandela ekhaya.
Indlelanchubo oluphelele ukunakekelwa nesineke evezwe iziqondiso eyinhloko yomsebenzi - medicine umndeni, lapho iningi ukunakwa igxile esizukulwaneni esisha. Centre "Ultramed" izingane (Omsk) wagxila zokuvimbela, high quality ukuxilongwa kanye nokwelashwa kwezingane ngesikhathi sokuzalwa. omama abasakhula ngesikhathi sokukhulelwa bangase bakhethe kuchwepheshe ukuze iseluleko nokusekelwa ngesikhathi sonke isikhathi.
Umtholampilo ukuthatha Ochwepheshe zezingane ezifana:
Udokotela wezifo zamehlo.
Umtholampilo "Ultramed" Omsk inikeza esibanzi survey okubhekiswe ukuthola imibhalo nolwazi:
Ngo yokubhukuda, esikoleni, zasenkulisa, iholide emakamu zezingane.
Ukuze umdanso kanye nezemidlalo.
Document ku sokukhubazeka yesikhashana, ikhadi sibhedlela nokunye.
Ngo "Ultramed" umtholampilo (Omsk) ingenye izikhungo engcono zokuxilonga emzini. imishini yobuchwepheshe laboratory emitholampilo ukuvumela ukuba kudlule bonke ucwaningo oludingekayo endaweni eyodwa.
Isakhiwo inikeza izifundo ezilandelayo:
Wokubhoboza ukuhlola (neoplasms we yegilo kanye mammary nezindlala, izitho zangaphakathi (izinso, wesibeletho, wendlala nokunye., Lakhulisiwe zamanzi, njll).
Clinical kanye ukuxilongwa laboratory (ukuhlaziya yomtholampilo, kwamakhemikhali, isimila omaka, izifo ezithathelwanayo, bacteriology, parasitology izifundo, hemostasis, isimo hormone, njll).
Kushisa bhé kule ndawo ukuhlola (-X-ray yezitho zangaphakathi nezicubu (amathambo, esiswini, izitho thoracic, izinso nokunye.), Excretory urography, mammography digital, multislice imaging nokunye.).
Ultrasound ukuxilongwa (esiswini, ubuchopho nokugeleza kwegazi ukufundwa ezinsaneni, endocrine nezindlala, izicubu ezithambile, izindlala zamanzi, amalunga, ucwaningo olunzulu amadoda, abesifazane, izingane).
ukuhlola ukusebenza (electrocardiography, rheoencephalography, kukulandzelela kwemalanga onkhe blood pressure, echocardiography, ukuskena Duplex, electroneuromyography, nsuku zonke ukuqapha ECG nokunye.).
Luhlolo endoscopic (gastroscopy, chromoscopy, colonoscopy, njll).
MRI (apharathasi nge mpo magnetic field resonance, ukufinyelela okugcwele inikezwa esigulini).
Inani elikhulu iziguli uphethwe libhekisela isikhungo "Ultramed" (Omsk). Amanani entengo ezinye izinhlobo ucwaningo tibalwe lapha ngentasi:
Ukugonywa - ruble 450 kuya 2900.
Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla radiology - ruble 450 kuya 4500.
Mammography - ruble 800.
-X-ray of the ukhalo - ruble 700.
Kuvunguza MRI ubuchopho - 2000 ruble.
MRI zobuchopho - ruble 2700.
Ukwenza izitifiketi yezokwelapha akho ezinsizakalo ezehluka - ngokuvamile umcimbi enzima edinga isikhathi esiningi. Nciphisa isikhathi osichitha ekusizeni emtholampilo "Ultramed" (Omsk).
luhlolo amasevisi amanani eseduze zimi kanje:
Ukwenza ukukhubazeka - 750 ruble.
Sibhedlela ikhadi abadala - ruble 1550.
Sibhedlela ikhadi izingane - ruble 1390.
Usizo enkulisa - ruble 640.
Usizo esikoleni - ruble 6360.
Isiphetho ukuthengwa kwezikhali - kusuka 495 ruble 1150.
Isiphetho ekushayeleni imoto - kusuka 790 ruble 1950.
Umkhuba ukwelashwa emtholampilo "Ultramed" sisekelwe ezimisweni kahle, ongaphakeme-umthelela, landela imikhuba engcono, kungase kutholakale nokwenza kwamazwe omhlaba. Iziguli ahlinzekwa amasevisi alandelayo:
ochwepheshe iphrofayela Ukwamukelwa.
esibhedlela ezimbili - usuku noma ukunakekelwa suku.
Shock yokwelapha wave.
Uhlelo Siqu zokwelapha.
Ukwelapha I-ozone, lithotherapy, Physiotherapy.
Ukuhlinzwa (endoscopic, ukuhlinzwa classical zokwelapha).
ukuhlinzwa Umhlinzi, ukuvuselelwa.
Physiotherapy, magnetotherapy, ukwelashwa laser.
Massage, ukwelashwa laser, Reflexology, njll ..
Ezigulini eziningi, impatho iyatholakala ku "Ultramed" isikhungo (Omsk). Izikhungo amanani iyashiyana yinkimbinkimbi isifo noma ukuhlinzwa. Ngokwesibonelo, reception we-ozone abelaphi, odokotela balinganiselwa ku ruble 300, futhi eyodwa yesimiso letindzala-ozone yokwelapha - ruble 400. kokubonisana eyinhloko udokotela ohlinzayo, wenhliziyo, isazi sezifo zezingane kubiza ruble 650.
Izibuyekezo ezinhle umsebenzi umtholampilo kanye nochwepheshe ukhulume imishini ezinhle lobuchwepheshe emtholampilo neminyango zokuxilonga. Lo mbhalo uthi ochwepheshe ewumngcingo amazinga ngokwanele noma eliphezulu amakhono nolwazi, kodwa namanje Kunconywa ukuba ngokucophelela ukhethe udokotela.
Izimangalo obonakaliswe ebhukwini ikheli ngenxa operation okungafanele, isimo sengqondo esinjalo sokungahloniphi kwezinye odokotela kanye emigqeni emide. Iziguli bakholelwa ukuthi umtholampilo elimele eyakhelwe Logistics, ngakho-ke, naphezu ngqo ngesikhathi esimisiwe, edilini lomshado ungathola emahoreni amabili noma ngaphezulu ngemva kwesikhathi ehleliwe. Ezinye iziguli wokuthi odokotela linqume ucwaningo ngaphezu kokudingekile, okuyinto kakhulu kwandisa izindleko ukuvakashelwa umtholampilo.
Umtholampilo "Ultramed" in Omsk itholakala ezindaweni eziningana, ilowo nalowo mnyango has lunye ayo:
Lesi sakhiwo esikhulu ivuliwe Chkalov Street, Ukwakha 12.
Luhlolo prophylactic eqhutshelwa Budarin emgwaqweni, ibhilidi 1.
Izingane sigaba siqala Valikhanov Street, Ukwakha 2.
Ukulala Laboratory itholakala emgwaqeni Komissarovskoy 18.
abasebenzi Isibhedlela "Ultramed" (Omsk) ocingweni, ungahlala ubuze imibuzo mayelana emisebenzini yesikhungo. Kube bathambekele ukulondoloza impilo abadala kanye nezingane. Ukuze isikhungo umsebenzi ngamakhasimende wonke amasevisi kanye nabasebenzi.
Siyaqonda ukuthi ukupha izingane ukuhlanza
Princess Little: indodakazi kaVictoria Boni Angelina